लुम्बिनीविद् वसन्त बिडारीलाई ७ प्रश्न - संवाद - नेपाल
लुम्बिनीविद् वसन्त बिडारीलाई ७ प्रश्न
वसन्त बिडारी, ६०, लुम्बिनी, कपिलवस्तु र नवलपरासीका बुद्धस्थल र इतिहासबारे जानकार मानिन्छन् । नेपालका मात्र नभई भारत तथा श्रीलंकाका बुद्धस्थलबारे पनि उनलाई यथेष्ट ज्ञान छ । पछिल्लो तीन दशकयता लुम्बिनी, कपिलवस्तुका धेरै अन्वेषण, उत्खनन र अनुसन्धानमा उनी आफैँ सक्रिय थिए । उनले २८ वर्ष लुम्बिनी विकास कोषमा पुरात्त्वविद्का रुपमा काम गर्दाको अनुभव, ज्ञान र अनुसन्धानको सँगालोलाई पुस्तकाकार रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवद्वय बानकी मुन र हाभियर पेरेज द कोइयारदेखि कैयौँ मुलुकका राजा, युवराज, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलगायतका अतिविशिष्ट व्यक्तिलाई लुम्बिनी र कपिलवस्तुको अवलोकन भ्रमण गराएका छन् । उनी श्रीलंका सरकारले कोलम्बो नजिक बनाउन लागेको बुद्ध थिम पार्कको परामर्शदातासमेत रहेका छन् । उनले अहिले लुम्बिनीसम्बन्धी पुस्तक सात भाषामा प्रकाशन गरेका छन् । उनीसँगको छोटो कुराकानी :
तपाईंको पुस्तकमा के छ ?
पुस्तकको पहिलो भागमा नेपालको सामान्य परिचय, बुद्ध जन्मनुअघि लुम्बिनी कस्तो थियो ? बुद्धजन्म र संक्षिप्त जीवनी रहेको छ । लुम्बिनीमा सम्राट् अशोकको आगमन र निर्माण, चिनियाँ तीर्थयात्रीको तीर्थाटन, इस्वीको चौधौँ शताब्दी र त्यसपछिको लुम्बिनीको अवस्था पनि उल्लेख छ । लुम्बिनीको खोजको सुरुआत, मायादेवी मन्दिर उत्खनन, संरक्षण र पुन:निर्माण, प्राचीन स्मारक र लुुम्बिनीमा विकासको सुरुआतलगायतका विषय छन् ।
पुस्तक किन धेरै भाषामा निकाल्नुभयो ?
लुम्बिनीलाई समेटेर सात भाषामा पुस्तक निकालेको छु । सातै भाषामा एउटै विषयवस्तु समावेश छ । सबैले बुझ्न सकून् भनेर सरल र सहज शब्द संयोजन गरेर धेरै भाषामा प्रकाशन गरेको हुँ ।
कुन कुन भाषामा प्रकाशित छ ?
नेपाली, अंग्रेजी, थाई, चिनियाँँ, बर्मिज, जापानी र सिंहला (श्रीलंकाली) भाषामा पनि पुस्तक प्रकाशन गरेको छु । सबैभन्दा पहिले सन् २००९ मा अंग्रेजी र सन् २०१० मा जापानी भाषामा पुस्तक प्रकाशन गरेँ । त्यसपछि सन् २०१३ मा नेपाली र थाई भाषामा प्रकाशन गरेँ । २०१६ मा अन्य तीन भाषामा प्रकाशन गरेँ ।
प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ?
सन् २०१५ सम्म आइपुग्दा अंग्रेजी भाषामा चौथो संस्करण प्रकाशन गरिसकेँ । नेपाली र जापानी तेस्रो संस्करण र थाई दोस्रो संस्करण प्रकाशन भए । २०१६ डिसेम्बर एक महिनामै बर्मिज संस्करण सकियो । फेरि निकाल्दै छु । आवश्यकता अनुसार पुन:मुद्रण गर्दै जान्छु ।
अझै अरू भाषामा पनि पुस्तक निकाल्दै हुनुहुन्छ कि ?
कोरियन भाषामा पुस्तक प्रकाशन गर्दै छु । ६ महिनाभित्र छापिइसक्छ । तिब्बती र भियतनामी भाषामा पनि पुस्तक प्रकाशनको तयारी गरेको छु ।
विदेशी भाषामा पुस्तक निकाल्ने प्रेरणा कसरी पाउनुभयो ?
१३ वर्षअघि बर्माका तीर्थयात्रीलाई मायादेवी मन्दिर घुमाउने क्रममा उनीहरूले प्रश्न गरे, हामी आफ्नै भाषामा लुम्बिनीबारे पढ्न पाउँदैनौँ ? यो कुरा मेरो मनमा गड्यो । मैले त्यही बेला प्रण गरेँ, लुम्बिनीलाई विश्वमा चिनाउनु जरुरी छ भनेर । पुस्तकको तयारीमा लागेँ । पुस्तकले आफ्नो मातृभाषा मात्र जान्ने विदेशीलाई सजिलो भएको छ । हजारौँ माइल परबाट आउने तर भाषाको ज्ञान अभावमा सामान्य जानकारी पनि नलिई फर्कने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।
पुस्तकका विशेषता के–के छन् ?
लुम्बिनी विश्व शान्तिको मुहान हो भन्ने सबैले थाहा पाउन सक्छन् । बुद्घको जन्मथलोबारे देशविदेशमा रहेको भ्रम हटाउन पुस्तकले सहयोग पुगेको छ । विरलै पाइने पुराना श्यामश्वेत फोटो र स्केचले पुस्तकको प्रामाणिकता थपेको छ । डिजिटल प्रविधि भित्रिएपछिको रंगीन र एरियल फोटोले पुस्तक थप आकर्षित बनेको छ । सयभन्दा बढी तस्बिर पुस्तकमा छन् ।